« Propagandy anaty orana » -
AccueilTresaka« Propagandy anaty orana »
09/10/2018 admintriatra Tresaka 0
Voalazan’ny lalàm-panorenana fa tsy azo atao mandritra ny vanim-potoan’ny orana ny fifidianana eto amin’ny firenena. Ny mifanohitra amin’izay anefa no mitranga ao anatin’izao fisokafan’ny fampielezan-kevitra izao. Nirotsaka tamin’ireo faritra maro mantsy ny orambaratra, ary tena natevina izany. Vao manomboka araka izany ny fampielezan-kevitra, dia efa manome ny sarin’izay mety ho tohin’izany ny toetr’andro amin’ny alalan’ny firotsahan’ny orana.
Nisy tamin’ny fampielezan-kevitra nokasain’ireo Kandidà notanterahina teto an-drenivohitra no voatery najanona vokatry ny firotsahan’ny orana, dia ny an’i Rolland Ratsiraka. Tany Antsiranana no nanokatra ny fampielezan-kevitra ity Kandidà ity, ary nikasa ny hihazo an’Antananarivo ny tolakandro. Tsy afaka nipetraka teo amin’ny seranam-piaramanidina tetsy Ivato anefa ny fiaramanidina nitondra azy, ka avy hatrany dia nihazo an’i Toamasina.
Tetsy ankilany, efa tomombana avokoa ny fanomanana rehetra ho an’ny tetsy Mahamasina, toerana saika hanaovana ny fampielezan-kevitra faharoa tamin’ny andron’ny omaly. Efa nanafana ireo mpanara-dia azy teny an-toerana ihany koa ireo mpanakanto maro. Nirava maina anefa izany satria tsy afaka namonjy teny amin’io toerana io ny kandidan’izy ireo.
Ny toe-javatra toa izany no antony nametrahana ilay vanim-potoana ahafahana miatrika fifidianana tao anatin’ny lalàm-panorenana. Mitranga anefa izy ankehitriny, dia iza no tompon’andraikitra?, ary iza ihany koa no omena tsiny, satria fatiantoka ho an’ireo Kandidà izao zava-nitranga izao. Vola nariam-potsiny mantsy ireo lany tamin’ny fanomanana iny hetsika tetsy Mahamasina iny, ho an’ny Kandidà Rolland Ratsiraka. Raha tsy hoe ny mpikarakara sy ny andrim-panjakana nisisika tamin’ny tsy maintsy hanaovana ny fifidianana no miantoka izay lany rehetra rehefa misy ny tranga toa izao. Tsy ilay Kandidà mantsy no tompon’andraikitra tamin’ny tsy nahatanterahin’ny fampielezan-kevitra teto, fa ny toetr’andro izay efa voasoratra mazava tsara ao anatin’ny lalàm-panorenana.